Dugsiga Waxbarshada ee Millikin wuxuu ku dhawaaqayaa Fursad Lagu Ansixiyo Waxbarashada Gaarka ah ee Macalimiinta Hada ⋆ Wararka: Farshaxanka, Safarka, Naqshadeynta, Teknolojiyada
Bogga ugu weyn Education
Iskuulka Waxbarshada ee Millikin wuxuu kudhawaaqayaa Fursada Ansixinta Waxbarashada Gaarka ah ee macalimiinta hada
Wax yar oo silamid ah, oo loo wada dhan yahay: Isbedelada ku saabsan u diyaar garowga macallimiinta waxbarashada gaarka ah ee la filayo inay saameyn weyn ku yeelato dugsiyada
Ardayda Tiyaatarka Waxay Laqabsadaan Faafida, Excel Maskax Ahaan
Jaamacadda New Haven waxay ku dhawaaqeysaa xiriir cusub oo looga golleeyahay kordhinta kala duwanaanshaha guud ee warshadaha maaliyadda
Xulashada Xulashada Iskuulka waxay ku socotaa Qeyb gaar ah oo ku saabsan COVID-19 iyo Dib u Furida Iskuulka
Buste duug ah oo lagu sameeyay 11,500 oo baal turkey ah | WSU Gudaha
McLaughlin Helitaanka Waxbarasho Mareykan ah
Kuleejka ku dhex jira Covid wuxuu muujinayaa runta ku saabsan mudnaanta waxbarashada - iyo raaxada darajooyinka wanaagsan
UNR, UNLV waxay u midoobeen waxbarashada sare
Buena Vista arday ka qalin jabisay ayaa la wadaagaysa mahadnaqa safarka waxbarasho ee hodanka ah
Maxaa ku dhacaya ardayda Aagga Bay ee go'aansada inay guryahooda iska joogaan sannadkan? Qaarkood kaligood bay noqon doonaan
Hal semester oo dheeri ah, ka shaqeynta macallimiintu waxay ku dari kartaa Ansixinta Waxbarashada Gaarka ah
Iskuulka Waxbarshada ee Jaamacadda Millikin wuxuu soo bandhigay nooc cusub oo ah Illinois oo ah Aqoonsiga Waxbarshada Gaarka ah ee Illinois oo loogu talagalay ka shaqeynta macallimiinta doonaya inay ku daraan Aqoonsiga Waxbarashada Gaarka ah liisankooda waxbarasho ee hadda jira.
Hal semester oo dheeri ah, ka shaqeynta macallimiintu waxay ku dari kartaa Aqoonsiga Waxbarshada Gaarka ah, iyada oo loo sii marayo Iskuulka Waxbarshada ee Jaamacadda Millikin, iyada oo la isqorto dhowr habeen, khadka tooska ah, casharro isku dhafan ama qof ahaan ah Ansixinta waxay daboolaysaa Xanaanada - Da'da 21 waxayna u ogolaaneysaa macalimiinta inay u adeegsadaan boosaska Waxbarashada Gaarka ah.
Barnaamijku wuxuu ka caawin doonaa macallimiinta kobcinta dhaqannada ugu wanaagsan ee loogu talagalay waxbarista ardayda kulleejada leh baahiyaha gaarka ah si ay ugu yeeshaan saameyn rajo leh khibradaha daraasadda ee aqoonyahannada.
Fasallada Ictiraafka Waxbarshada Gaarka ah waxaa loo qorsheeyay inay bilaabanto xilliga Qabashada Jiilaalka xilliga Jiilaalka / Xagaaga 2021.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan u fidino macalimiinta ku tababaran aagga hab wax ku ool ah oo lagu kasbado Taageerada Waxbarashada Gaarka ah xulasho fiidkii, khadka tooska ah, fasalo isku dhafan iyo shaqsiyeed," ayay tiri Dr. Pamela J. Barnes, agaasimaha Millikin Iskuulka Waxbarashada. Qaabka isku dhafan ee ku habboon koorsooyinka gobolka looga baahan yahay hal xilli-dugsiyeed la dheereeyay ayaa ah sida ugu habboon ee aan ku bixin karno. ”
4-ta barnaamij ee soosocda ayaa looga baahanyahay si loo helo gobolka Taageerada Waxbarashada Gaarka ah ee Illinois:
ED 115 Istaraatijiyadaha Waxbarid ee Shakhsiyaadka Naafada ka ah Barashada Fasalada Ok-12
ED 215 Kala duwanaanshaha Barashada ee Shakhsiyaadka leh Fudud iyo Dhexdhexaad Baahida Waxbarashada Waxbarashada
ED 220 Hordhac Waxbarista Shaqsiyaadka leh Awoodo Kala Duwan oo Fasalada Ok-12 ah
Baadhista ED 408 iyo Qiimaynta Ardayda Baahiyaha Gaarka ah ku qaba Fasallada Ok-12
Markay dhammeeyaan casharrada oo ay ka gudbaan baaritaanka waxyaabaha looga baahan yahay gobolka, macallimiintu waxay u badan tahay inay xaq u yeeshaan oggolaansho iyagoo adeegsanaya Sarkaalka Shatiyeynta Millikin.
Sida laga soo xigtay AdvanceIllinois.org, in ka badan kalabar boosaska macallimiinta aan buuxin ee Illinois waxay ku jiraan laba luqadood iyo Waxbarashada Gaarka ah, taas oo macnaheedu yahay bartayaasha Ingiriisiga iyo ardayda jaamacadda ee sida gaarka ah u doonaya inay aad ugu yar yihiin helitaanka caawimaadda ay doonayaan, gaar ahaan haddii ay ku nool yihiin degmooyinka aan dhaqaalahoodu fiicnayn ee ardayda kulliyadda dakhligoodu hooseeyo ee dheeraadka ah. Iyada oo ay soo kordhayaan macallimiintii yaraanta ee Illinois, Taageerada Waxbarashada Gaarka ah ee Millikin ee macallimiinta hadda waxay sameyn kartaa kala duwanaansho xoog leh.
Barnes ayaa intaas ku daray, “Macallimiintu wax badan ayay iska bartaan midkoodna haddii koorsooyinku yihiin kuwo loo maro Zoom ama qof ahaan, macallinka gaarka ah ee Millikin wuxuu fududeyn doonaa waxbarashadooda. Koorsooyinku waxay siin doonaan macallimiin ku tababbaran aqoonta si ay si fiican ugu adeegaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba fasallada ay ku jiraan. ”
Dr. Pamela J. Barnes, agaasimaha Iskuulka Millikin ee Waxbarashada
Lacagta Lagu Bixiyo Aqoonsiga waa $ 1497 seddexdii koorso ee dhibcaha dhibcaha. Xaddidan $ 500- $ 1000 deeq waxbarasho ayaa la heli karaa. Codsadeyaashu way buuxin karaan Codsiga Bilaashka ah ee Gargaarka Ardayga ee Federaalka (FAFSA) ee loogu talagalay awoodda u-qalmitaanka amaahda.
Si loo diiwaangaliyo ama faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Aqoonsiga iyo weydiimaha deeqaha waxbarasho, iimayl u soo dir tababarka@millikin.edu.
Dugsiga Waxbarashada Millikin
Dugsiga Waxbarashada ee Jaamacadda Millikin wuxuu doonayaa inuu abuuro bulshooyinka bartayaasha iyo barashada bey'adaha muujiya qiimaha kala duwanaanta, ka mid noqoshada iyo waxbarashada firfircoon.
Ardayda ku jirta Iskuulka Waxbarashada ee Jaamacadda Millikin waxay ka faa'iideystaan ​​cabirro fasallo yaryar ah, khibrad u leh edbinta bilaabaya simistarkooda koowaad, tababar wada-baridda iyo beddelka joogtada ah ee Waxqabadka Barashada si loogu adeegsado khibrad la soo helay. Macluumaad dheeri ah, ka eeg millikin.edu/train.
article PreviousSingapore Ma Ku Biiri Doontaa Isbahaysiga Biden ee 'Dagaalkii Qaboobaa – Model' ee Ka Dhanka Ahaa Shiinaha, Ayuu Yiri RW
Next articleMAXAA MA AH Akhriska, laakiin DAREENNU Waxay jecelyihiin akhriska?
Baasaboorada lagu iibsado: Sidee dadka caanka ahi ugu dhacaan cudurka faafa
(CNN) — For most individuals, the coronavirus pandemic has meant fewer journey choices. Not so for super-rich households who're more and more utilizing their...